ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ပြည်သူ့အသက်တွေ အလျော်ပြန်ပေး (ရဲရင့်သက်ဇွဲ)
နာဂစ်ပြန်တော့ ကျန်ရစ်တယ် .. ။
၀တ်ကျေတန်းကျေ နိုင်လွန်းလှတယ် .. ။
ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့ ..
စစ်အုပ်စုရဲ့ ရိုက်ချက်ကပြင်းလွန်းတယ် .. ။
ကယ်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် .. ။
ဇိန္နမာန ဥာဏ်နဲ့ အုပ်စိုးသူတို့လက်အောက်က
ကူညီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သူမှန်သမျှလာပါ ..
သောက်စရာ ရေပေးပါ ..
နေစရာ နေရာပေးပါ ..
အတ္တလောက်တွေ တဖွားဖွားနဲ့ပေါ့ .. ။
ကျက်သရေယုတ်သူများအား စွဲချက်တင်လိုက်တယ် .. ။
စစ်အုပ်စုကြောင့်သာဖြစ်တယ် .. ။
တရားသဖြင့် မျှတသောစီမံမှုကို ပေးတော်မူပါ .. ။
ပြည်သူလူထု လွတ်မြောက်ပါစေ …
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:26 PM
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်..မကာကွယ်နိုင်တာ သိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကြ်ိုသိခဲ့ရင်.လူ့အသက်တွေ ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရင်..ရှိတဲ့ လူတွေ ကို ၄၈နာရီ အတွင်း ဘေးလွတ်ရာ နေရာပြောင်းရွေ့ ဖို့ လူကြီးသူမပီပီ သတိပေးနိူင်ပါတယ်.။
ဒါမုန်တ်ိုင်းပါ.ဖြုဖွေးနေတဲ့ ဝဲကတော့ နဲ့ တိမ်တိုက်ကြီး ဘယ်လောက် အဝန်းကြီးတယ်..ဘယ်နေရာကို ဦးတည်လာမယ်ဆိုတာ..မြင်ရခန့် မှန်းနိူင်ပါတယ်။
ငလျှင်။ ဆူနာမိ ဆိုတာက.အမှတ်တမဲ့.ရုတ်တရက်. ဗြုံးစားကြီး ထလှုပ်တာမျိုး မို့ မသိလို့ သေတယ် ဆိုရင်..ခွင့်လွတ်နိုင်ပါသေးရဲ့.။
အမှန်က ဒါဟာ မီဒီယာ သတင်းမှောင်ချမှူပါ. သူတို့ အမျိုးတွေ ကျ..သူတို့ ပစ္စည်းတွေကျ လွတ်ရာရှောင်ထားပေးပြီး ကျန်တဲ့လူတွေကျ သေပစေ။
အချိန်မီ မုန်တိုင်း သတင်းပြရမဲ့အစား.ကိုရီးယားကား နှပ်တရွဲရွဲနဲ့ငိုရတဲ့ကားတွေပြပြီး လူတွေကို စိတ်ပြောင်းထားတာ။
အခုတော့ နောက်ဆုံး ဗမာတွေ အပြုံလိုက်သေ.တကဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် ငိုရမဲ့ဘ၀ ဖြစ်နေတာပါ။
လိုရင်းကတော့ စေတနာပါ။ အာဇာနည်တွေက ရသမျှ CBOX ထဲလာပေးတဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းတွေကို.အရေးကြီးတဲ့ဆိုက်တွေထဲရောက်အောင်..ကျနော်တို့ ဖြန့် ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ ရဲ့ blogger.com ကို.ရွှေဘဘတို့ ကဘန်းထားပြန်။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကလည်းနှေး.ကျနော်များကလည်း.ရေဒီယို စတေရှင်လည်း မပိုင်။
ဦးထွန်းလွင်လို weather Man လည်းမဟုတ်လေတော့..
မသဒ္ဓါကြီးမှာ တတ်နိုင်သလောက်လူသိအောင် ကြိုးစားသော်လည်း..အရာ မထင်ခဲ့ပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်.ကျနော်တို့ အုပ်စု တတ်အားသ၍တော့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်သောင်စပ်က ဆားချက်ရွာ..ငပိ လုပ်တဲ့ရွာ က တဲပုတ် စုတ်စုတ်ကုပ်ကုပ်ကလေးတွေ ကတော့..အင်တာနက်လည်းမသိ. ဘလော့ဆိုတာလည်းမသိ
။ ကွန်ပြူတာ လည်းမသိ။ ဘာရေဒီယို တီဗွီမှ မရောက်တဲ့နေရာကလေးကို မုန်တိုင်းကိစ္စ အသိပေးဖို့ ကိစ္စတွေကတော့
အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရလို့ သူတို့ ဖာသာခေါ်နေသူတွေရဲ့ အလုပ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ဘဲခေါင်ခေါင် နီးရာ ခရိုင်မြို့ နယ်တွေ နဲ့အဆက်အသွယ်တော့ရှိကြတာပါ။
နေပြည်တော်ကြီးဟီးနေပြီး..တောရွာဇနပုဒ် မီးကလေးမှိတ်တုတ် ( အဲလေ..မြို့ တော်ဟောင်းကြီး ရန်ကုန်လဲပါတာပေါ့)
ဖြစ်နေတာတော့..အစိုးရမင်းများ၏ XXX သုံးမကျခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကြည့်ပါ။ မုန်တိုင်းကလာ ဖြစ်..လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကလည်း ညံ့မှ ညံ့။
ဦးသန်းရွှေ ဒါတွေ သိပါတယ်..သူဧရာဝတီတိုင်းမှူးအဖြစ်နဲ့ နုစဉ်က ဧရာဝတီတိုင်းက ထွက်ကုန်တွေ တဖြဲ နှစ်ဖြဲ စားခဲ့ဘူး ပါတယ်။
တကယ် ဒုက္ခရောက်တော့ မကူဘူးဗျာ.။
သူသာစဖြစ်ကတည်းက..နိုင်ငံတကာကို အကူအညီတောင်းခဲ့ရင်..ရေမျော နေတဲ့ အသက်ရှင်နေသူတွေ..
အစာမရ ရေမရ.. ရောဂါရ သေမဲ့လူတွေ အသေအပျောက်နည်း ကယ်နိူင်မှာပါ. သူမကယ်ဘူးဗျာ။
သူက မကယ်တဲ့အပြင် သူများကယ်ဆယ်တာတွေ မနာလို သ၀န်တို ။
စစ်တပ်တွေ မိုက်ကြေးခွဲ ခိုးယူခိုင်း။.. ငတ်နေသူတွေ.၂သန်းခွဲရှိရက် .အစာရှိရက်နဲ့ မဝေ။
ပိုပိ်ုသေအောင်လို့စိတ်ယုတ်နဲ့ လုပ်တဲ့အတွက်..
စပါးပေါ်ချိန် ရွေငွေ တွဲလွဲရွင်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက လူတွေဟာ
ဒီရာဇ၀င်ကြွေး.ဧရာဝတီ က သမိုင်းရေးထားပါတယ် သန်းရွှေ.
ပွဲပြီးတဲ့အထိ ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့ ။
အနားမှာဟောင်နေတဲ့ခွေးတွေ ..ဒေါ်လာ တသန်းပေးရင်..
အိပ်ရဲရင် ရဲရဲ အိပ် သန်းရွှေ.။
မနက်ဖြန် မင်းငရဲခန်းဝကို ဗီဇာ တင်ရန် တန်းစီဖို့ အရောက်..
ခေါင်းမပြုတ်အောင်..ကိုယ်နဲ့ ခေါင်း သော့ခတ်ပြီးအိပ်..
နောက်မှ မိချောင်းမျက်ရည်နဲ့ လာချွေးမသိပ်နဲ့ ..
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကတစ်ဆင့် နာဂစ်လေဘေးအတွက် လှူလို့ရပြီ။